काठमाडौँ । ‘फिल्मी फेन्टेसी’ को प्रभाव निकै गहिरो हुन्छ । वास्तविक धरातलबाट कल्पनाको खुल्ला आकाशमा उडाइदिन्छ मानिसलाई । प्रभाव कति समयसम्म र कुनरुपमा रहन्छ भन्ने कुराले निकै ठूलो महत्व राख्छ
डोटीमा एउटै गाईले पायो ३ वटा बाच्छि
विमल बिष्ट, डोटी । डोटीको जोरायल गाउपालिका ५ धुपारी स्थित मोहनबहादुर बोगटीको गाईले ३ वटा बाच्छि पाएको छ । स्थानिय जातको उक्त गाईले ३ वटा बाच्छि पाएपछि उनको घरमा उक्त
अब ४ घण्टामा पुरै पृथ्वीको यात्रा !
पृथ्वीको यात्रा केवल ४ घण्टामा । यो सुन्दा तपाईहरुलाई विश्वास नै नलाग्न सक्छ । तर, आउँदो केही वर्षभित्रमा पृथ्वीको एउटा कुनाबाट अर्को जुनसुकै कुनामा जम्मा ४ घण्टाभित्रमा हवाइजहाजमा पुग्न सकिने
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ । यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता
एजेन्सी । आलुको सेवनबाट दिर्घायु बन्ने खबर कहिल्यै सुन्नु भएको छ ? यदि छैन भने यो खबरले तपाईको आयु नै बढाउन मद्धत गर्नेछ । प्रसंग हो दिर्घायु बनाउने आलुको ।
स्याउले महिलाको यौन सन्तुष्टि बढाउँछ
नियमित रुपमा स्याउ खाँदा महिलाको यौनेच्छामा वृद्धि हुनुका साथै सहवासबाट हुने चरमसुखमा समेत वृद्धि हुने तथ्य पत्ता लागेको छ । इटालीमा गरिएको अध्ययनले दैनिक रुपमा कम्तिमा पनि एक दाना स्याउ
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । लागु औषध तस्करीका लागि विश्वभर कुख्यात देश हो कोलम्बिया । यस देशमा बढे बढे कुख्यात तस्करहरु वर्षौँदेखि लागुऔषधको कारोवारी गरिरहेको छन् । तर पछिल्लो केहि बर्षमा
१ लाख पुरुषसँग ओछ्यान तताउने लक्ष्य
एजेन्सी । पोल्याण्डकी एक युवतीले आफ्नो जिवनकालमा १ लाख जना पुरुषसँग ओछ्यान तताउने लक्ष्य लिएकी छिन् । भर्खर २२ वर्ष पुगेकी उनले आफ्नो यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि काम सुरुवात
अनुहार चम्काउन कुकुरको पिसाव सेवन गर्छिन यी महिला
एजेन्सी, गाईको मुत्रलाई गहुँत भन्दै खाने चलन हाम्रो नेपाली समाजमा कुनै नौलो कुरा होईन । तर, एकजना महिलाले आफ्नो अनुहार चम्किलो पार्न र अनुहारका दागधब्बा हटाउन भन्दै आफैंले पालेको कुकुरको
५२ वर्षअघि हराएको क्रिकेटरको औंठी, अहिले कुकुरले पत्ता लगायो
काठमाडौं – पूर्व बेलायती क्रिकेटर एड्डी स्टोकोएले ५२ वर्षअघि हराएको बिहेको औंठी अहिले आएर फेला पारेका छन् । उनले क्रीजमा ब्याटिङ गरिरहँदा औंठी हराएका थिए । सन् १९६६ को मार्चमा
आमालाई यौनवद्र्धक औषधी भियाग्रा खुवाइएपछि बच्चाहरुको मृत्यु
नेदरल्याण्डमा गर्भवती महिलामाथि भियाग्राको चिकित्सकीय परिक्षणलाई ११ नवजातको मृत्युपश्चात् तुरुन्त राकिएको छ । अनुसन्धानमा भाग लिइरहेका महिलालाई यौनवद्र्धक औषधी भियाग्रा खुवाइएको थियो । यो शोध ती महिलामाथि गरिएको थियो जसको
रत्ननगर, चितवन, रत्ननगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाट गाईलाई सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम शुरु गरेको छ । नगरपालिकाको पशुपक्षी शाखाका प्रमुख शालिग्राम पौडेलका अनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी गाईलाई सुत्केरी भत्ता
बिहे पछि एउटा नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ
यति धेरै बोल्ड तस्बिर राष्ट्रपतिकै हो त ?
क्रोएशिया । क्रोएशियाकी राष्ट्रपति कोलिन्डा ग्रबर किटारोभिचको भिडियो भायरल भएको छ । भिडियोमा उनी राष्ट्रिय टोलीसँग रुसमाथि क्वार्टरफाइनलमा मिलेको जितमा खुशी मनाइरहेकी छिन् । क्रोएशियाको झण्डावाला पोशाक लगाएकी कोलिन्डालाई संसारकै
महिलाहरू जीवनमा केही न केही फरक खालको सेक्स अनुभव गर्न चाहने एक अध्ययनले देखाएको छ । मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठो–अनौठो यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउने तथ्य उक्त अध्ययनबाट
मामुली ब्याग २ करोड ३३ लाख बराबरको मूल्य
एउटा ब्यागको मूल्य कतिसम्म पर्ला ? बेलायतमा एउटा मामुली ब्याग २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको मूल्यमा बिक्री भएको छ । १८ क्यारेट ह्वाइट गोल्ड तथा हिरा जडित लकयुक्त उक्त
नौं बर्ष अघि कतारबाट घर आउदै छु भनि खबर गरेका बस्नेत अहिलेसम्म बेखबर
रामधन राई, खोटाङ । कतारबाट काठमाण्डौं फर्किंदैछु भनेर नौं बर्षअघि फोन सम्पर्क गरेका खोटाङ मंगलटारका देवबहादुर बस्नेत सोही दिनदेखि बेखबर बनेका छन् । २०६६ सालको कुलपूजा देवालीमा घर आईपुग्छु भनेर
छोरीलाई स्तनपान गराउने पहिलो पिता
वासिंगटन, (एजेन्सी) अमेरिकाको विस्कोन्सिनमा एक परिवारमा यसै वर्षको जुन २६ मा एक शिशुको जन्म हुँदै थियो। अस्पतालको त्यो रात आमाका लागि खासै फरक त थिएन तर पितालाई भने कसैले सोच्नै
जान्नुहोस यस्ता छन्ग र्मी बढ्नुका विभिन्न कारणहरु ?
चैत बैशाखको अत्यासलाग्दो घाम होस् वा वर्षापछि असार साउनको वर्षातपछि हुने उकुसमुकुस, यस्तोमा धेरैको लागि प्रिय भएको छ एसी अर्थात एयर कन्डिसनर त्यसैले गर्मी धेरै छ एसी चलाइदिनु न ।’
यस्ता छन् आँप खादा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
आपलाई कतिले डिजर्ट बनाएर खान्छन् त त सतिले भातसँग त कतिले त्यसै पनि खान्छन् । सिजनको फल जसरी खाएपनि हुन्छ तर भनिन्छ नि धेरै खाएमा अमृत पनि बिष हुन्छ, चिनी